डा. गेहेन्द्र महरा – Health Post Nepal
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ लाई महामारी घोषणा गरेदेखि धेरै मानिस घरमै बसिरहेका छौं। अहिले देशमा बन्दाबन्दी अलि खुकुलो पारिँदै लगिए पनि पूरै रूपमा खुला हुन्। पहिले जस्तै सामान्य रूपमा हिँडडुल वा घुमफिर गर्न अझै धेरै समय पर्खनुपर्नेछ। यही बन्दाबन्दीले...
के तपाईलाई थाहा छ कोरोना संक्रमणबाट उपचारपछि निको भइसकेका मानिसमा फेरि यो रोग बल्झिएको ? डरलाग्दो के छ भने रोग निको भएर घर फर्किएकामध्ये करिब १४ प्रतिशतमा पुनः संक्रमण देखिएको छ। भर्खरै चिनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले प्रकाशित गरेको विवरण...